कसैले सिट्टी फुक्दैमा जनता पछि नलाग्ने प्रम ओलीकाे कटाक्ष
रिपोर्ट नेपाल | 2019 Apr 15 | 06:49 am	29
काठमाडौं, वैशाख २ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विपक्षीलाई ‘नन्दीभृंगी’ को संज्ञा दिँदै आन्दोलन नगर्न सुझाएका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आइतबार ‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा तथा खोलौं बैंक खाता अभियान’ शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैले आन्दोलन भनेर सिट्टी फुक्दैमा जनता नकुद्ने दाबी पनि गरे।
११ विद्यार्थी संगठनद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलन आह्वान गरेका थिए। ‘अस्तिका दिन पनि १३ वटा विभिन्न आकार प्रकारका नन्दीभृंगी भेला भएछन् र आन्दोलन गर्छौं भनेछन्। म अरू केही भन्दिनँ, नगर्नुस् मात्र भन्छु, विपक्षी दलतर्फ लक्ष्य गर्दै ओलीले प्रश्न सोधे, ‘जसले आन्दोलन भनेर सिठी फुक्छ, त्यसैको पछि कुद्छन् नेपाली जनता ? के यो सम्भव छ ?
उनले स्थिरता, विकास र शान्तिका लागि जनताले मतदान गरेको भन्दै सोहीअनुसार सरकार बनेको बताए। ‘सरकारले देशका निम्ति काम गरेको छ। वृद्धवृद्धाको छेउमा सरकार ढाल्ने कुरा नगर्नुहोला। ढुंगा हान्छन्, परपर भन्नुस्। केटाकेटीले सुन्ने गरेर पनि नभन्नुहोला, ओलीले चेतावनी दिँदै भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा यो अभियान सुरु गरेका हुन्। अभियान क्रममा सरकारले प्रिमियम तिर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमासमेत घोषणा गरिएको छ।
‘दुई झरी पानीले भिज्दा पनि केही नहुने बैंसका मान्छेलाई बिमाको त्यति आवश्यक नहोला तर लौरो टेकेर हिँड्नेलाई बिमा र बैंक अत्यावश्यक छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले मानवअधिकारको नारा पिट्नेहरूले यस्ता काम नदेख्ने भन्दै मानवअधिकारवादीप्रति पनि कटाक्ष गरे। ‘मानवअधिकारको मापन गर्न फेद टुप्पो नभएको फित्ता लिएर हिँडिरहेका छन्। मानवअधिकारको उच्च आधार मानवीय र सामाजिक भावना हो। सरकार यसमा स्पष्ट छ। सरकार मानिस जन्मेदेखि मृत्युदेखिका आवश्यक कुरा उपलब्ध गराउन लाग्नेछ, उनले भने।
कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यको अधिकार जीवनको अधिकार भएको भन्दै आधारभूत मानवअधिकार पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने नीति रहेको बताउँदै ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नागरिकलाई सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समय लाग्छ’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लामै समय लाग्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै लामो समय लिए पनि भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेरै छाड्ने बताए। नयाँ वर्ष २०७६ को उपलक्ष्यमा देशवासीलाई शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहनलाई सरकारले छुट नदिने स्पष्ट पारे। ‘राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहनलाई सरकारले छुट दिने छैन। ती कार्यको परिणामबाट परेको सकारात्मक असर सार्वजनिक भएकै छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ चुनौतीपूर्ण छ। यसले लामै समय लिन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने।
सुशासनको शत्रु भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ‘मुखमा पानी हालेर नबोल्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने’ आफ्नो दृढ सार्वजनिक घोषणा भएको पनि उल्लेख गरे। भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली नभएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तामो–तुलसी छोएर वा कण्ठी समाउँदै धर्म भाकेर, बर–पिपल वा दोबाटोको चुच्चे ढुंगालाई साक्षी राखी गर्दिनँ भनेको काम/कुरा नगर्ने इमान भएको जाति नेपाली हो। तसर्थ, भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइन, हुनै सक्दैन।’ प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष संघीय शासन व्यवस्थाको जग बसाल्दै गर्दा कसरी काम गर्ने भन्ने अवस्थामा मुलुक रहेको स्मरण गर्दै अहिले प्रगति सुनाउने अवस्थामा नेपाल आइपुगेको पनि जिकिर गरे।
ओलीले संघीयता मुलुकका लागि नयाँ अनुभव भए पनि शासन प्रणालीको सबै तहका सरकार अहिले व्यवहारबाट सिक्दै, कमी/कमजोरीलाई चिर्दै अघि बढ्न थालेको बताए। प्रधानमन्त्रीले अगाडि थपे, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जगैबाट उठ्दै छ, आफ्नै भूमिमा उम्रिएको यो टुसा हुर्किंदै छ। मुलुकको आर्थिक/राजनीतिक रूपान्तरणको यस प्रक्रियामा धैर्यपूर्वक संलग्न हुने र यसलाई संस्थागत र कामकाजी बनाउन सघाउने सबैलाई म, शुभकामना तथा बधाई दिन्छु।’
सरकारले गरेका कामको जवाफ तथ्य/तथ्यांककै आधारमा दिन तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। सरकारले गरेको कामको खोजी आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि जनताको जीवनस्तरमा देखिने पनि उनले दाबी गरे।(अन्नपूर्ण पाेष्टबाट)